Indlela Yokuqalisa Ibhizinisi Eliphumelelayo E-Commerce: Amathiphu Kusuka ku-Semalt
Uma uvula ibhizinisi elihwebayo le-e-commerce, impumelelo yalo ixhomeke kakhuluizici eziningi, iningi lazo lizungeze i-SEO. Abantu abaningi bakuthola kunzima ukuqhuba e-commerce ngenxa yezinkinga ezininginjengokukhetha kwemikhiqizo, i-niche, ukudala iwebhusayithi, ukuthuthukisa ama-SEO namasu wokumaketha, njll
Kulesi sikhathi sedijithali, kunezingosi eziningi ze-e-commerce. Uma ukhonausesho, kunzima ukwazi ukuthi yiliphi isayithi okufanele ulivule. UJack Miller, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,yembula izinto ezimbalwa ze-SEO ukusebenza, okungaba nethonya elihle ebhizinisini lakho le-e-commerce.
Ukuvula isitolo se-e-commerce
Uma uvula ibhizinisi le-e-commerce, kuhle ukukhetha i-niche encane, okuyiyonaunomncintiswano ophansi. Izindlalelo ezinkulu ezihlangene zithola ukuncintisana okunzima kakhulu ezitolo ezisevele zikhona njenge-Alibaba kanyeAma-Amazon - jalplast. Ukuphumelela ku-SEO kungaba nzima njengoba igunya lakho lekhasi alikwazi ukufanisa idumela nezibuyekezo zabo. Ukwenza okuhle ngaleyo ndlelaimodeli yebhizinisi, udinga:
Ulwazi olwanele nokuhlaziywa kwemakethe yakho
ukumaketha oku-intanethi namakhono e-commerce
Umphakeli onokwethenjelwa wemikhiqizo yakho njengabalingani kanye
Isikhulu sokuqasha ubuchwepheshe obengeziwe futhi ukhokhele amathuluzi ambalwa
Amathuluzi okuzenzekelayo alula njenge-finder ne-Google AdWords angakusiza ukukwenzaucwaningo oluthile kwi-niche kanye namagama angukhiye ongawasebenzisa ekuqukethwe kwakho kuwebhu..Izikhangiso ezihlosiwe ngokungahleliwe zingakusiza ukuba ufinyelele abantu abakhonakwi-niche uqondisa ngezindlela ezizenzakalelayo ezifana nezikhangiso ze-Facebook.
Sebenzisa amandla okuthumela phansi
Abathengisi abaningi bedijithali bakhetha ukusebenzisa ukuthuthwa kwehliswa, ngoba kuqeda isidingongokugcina impahla noma ukubhekana nezimpahla wena. Bathumela le nto ngqo ekhelini lokuthumela elihlinzekwe ngumthengiiwebhusayithi yakho. Ngenxa yalokho, kukhona ukuhlukaniswa kwemisebenzi kanye nokwaziswa okukhethekile. Wonke amaqembu ahlanganyela kulokho abakuhle abakwenzayo.Njengomthengisi wedijithali, le nketho ingakunika ithuba elihle lokukhangisa inthanethi njenge-SEO esikhundleni somkhiqizoukuthengwa kwempahla. Noma kunjalo, ukubuyiselwa kabusha kuhambisana nokulinganiselwa okuncane. Isibonelo, ama-margins enzuzo aphansi kakhulu, nomthengisiayibheki imikhiqizo ngokwayo.
Izinkampani zokukhiqiza zingafinyelela kubathengi
Izinkampani ezinomsebenzi oyinhloko imikhiqizo yokukhiqiza ingazuza ngokuphumelelayoamawebhusayithi e-commerce. Noma yiliphi ibhizinisi elikhiqiza futhi lidayise umkhiqizo lingakwazi:
Vula iwebhusayithi ukuthengisa imikhiqizo kubathengi
Thengisa brand yayo ezimakethe imikhiqizo eminingi efana Amazon
Thengisa kubanikezeli nabathengisi abaqashiwe umsebenzi wabo ukuphula inqwaba noma
Ukuhlanganiswa kokubili noma zonke izindlela ezingenhla
Amabhizinisi okukhiqiza kunzima ukuqala nokusebenza. Yingakho kubalulekilekumthengisi we-digital ukukhiqiza imikhiqizo evela emasimini ahlukahlukene futhi wakhe umkhiqizo ohlukile.
I-E-commerce yinsimu ebanzi ngamathuba amaningi. Abaningi osomabhizinisi bayazi ngalokhuokungekho okungapheli kokumaketha kwedijithali, kodwa kunenkathazo ethile ukuyibeka ngokugcwele. Isibonelo, amawebhusayithi ahlukene wezohwebo ayenayoukukhathazeka ukuthola amaklayenti avela kwi-intanethi enkulu. Ukusebenzisa amathiphu wokuthengisa we-digital ngenhla, ungasebenzisa i-e-commerce ibhizinisi eliphumelelayo ku-intanethifuthi ugcine ukukhula kwesikhathi eside.